Oduu gara garaa - Onkoloolessa 29, 2017 -
ወያኔ በመላው ኦሮሚያ ጠንከር ያለ አዲስ ጥቃት ለመሰንዘር ዝግጅት ማጠናቀቁን ታማኝ ምንጮች አመለከቱ። ከጥቅምት 18 2010 ጀምሮ የሚከተሉትን እርምጃዎች ለመዉሰድ ሰፊ ዝግጅት አድርገዋል።
1. ኦሮሚያ ውስጥ በሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ግዲያ መፈጸም
2. ለሰላም የቆሙ የኦሮሚያ ፖሊስ አባላትን ከጸረ ሰላም ኃይሎች የቆሙ በማስመሰል የስም ማጥፋት ፕሮፓጋንዳ ማካሄድና ፎቶግራፋቸውን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዓርማ ጋር ማሳየት
3. የኦህዴድ አመራር አባላትን መግደል
4. በኦሮሚያ ክልል ያሉ ባለሀብቶችን ንብረት ማቃጠልና ማውደም
5. ከላይ የተዘረዘሩ እርምጃዎችን እስከ ጥቅምት 18 ቀን 2010 ማጠናቀቅና ጥቅምት 20 ቀን 2010 ዓ.ም. ፓርላማውን በመጥራት በጉዳዩ ላይ ማስወሰን።
ስለዚህ ሕዝባችን ይህን ጉዳይ ነቅቶ እንዲከላከል ጥሪ ቀርቧል። ” Via Geresu Tufa
Komandi postii deebi’ufi jedhu. Komandii postii kana warri hoganan isaan kana jedhu warrii keessa beeku. Mee namonni kun eenyu?
Isayas Woldegiorgis (security agency)
Namichi kun sabaan Tigreedha. Duraan itti aanaa Getachoo Asafa hogana basaastota ture. Nama baayye gara jabaatufi gocha sukkannesa namarratti fudhatu. Getachoo jibamee gatamee namitichi kun maaliif akka komandi postii keessa gale namaaf hin galu.
Asefa Abiyu ( federal police Commissioner)
Namitichi kun sabatti Guraagedha. Namaaf hin nahu. Namas hin midhu. Hojii kana jedhamu hojates hin beeku.
Reta Tesfaye (vice director of Maekelawi)
Namitichi kun Oromo, Horro Guduruu nannoo Harato jedhamtutti dhalate. Namni gara jabatu akka Rataa biyya lafarra waan jiru natti hin fakaatu. Kana dura waaye namicha kana xinno barresen ture. Garuu waaye isaa namni natti hime hidhaa waan jiruuf nageenyaa nama saniitif akka ragaa itti hin taanef waan hunda hin barreesu.
Girmaa xurunee fi Rataa Tasfaaye
Jarri lamaan kun obboleewwan ykn hiroyoota afaan waliiti nyaatan. Midhaa ilmaan Oromo irran gahaa turan waliin qindeefatu, waliin hordofu bu’aa isaas waliin qodaatu. Mee xinno hojii isaaniin isinitti hima.
Bara 2011 eegalee Girmaa xurunee maqaa adda addaan seeli ABO jechuun iddoo adda addatti hundeesa. Erga kana godheen booda warra Asmaraa jiranitti “dargagoota ijaareen ofharaka qaba dhimma itti baha” jedhan. Isaanis dhugaa itti fakaatee karaa hundaan deegarsa godhuuf. Qarshii kumaataman lakkawwamu itti ergu.
Yeroo kana Girmaan Rattatti gabaasa. Rattaan Isaayasitti gabaasee qarshii miliyeenan rammadchifata. Girmaa fi Rataan qarshii kana gargar qoodachuun ergam hamma tokko ittin bashanananii booda (Girmaan dubartii Sharatanitti siree qabe waama) wagga tokko lamaan booda qabu. ABOn warra qindeese qabame jedhame sirbama. Girmaa fi Rataan seeli ABO cicciran jechuun badhafamu. Qarshii hagamii ykn maal akka badhaafaman Rabii tokkichi yaabeku.
Warra Asamaratii immo “ijollee sani dinni qabde. Ani baqadheen jala bahe” ykn akka yeroo namni 56 Bole qabame san “dallarran utaalen bahe” isinitti yaa muldhatu Maa’ikalawwi keessa utaalee yoo bahu. Isaan kun utaaluu waan dadhabaniif achi taa’u. Garuu jedhan warra Asamaraan. “Garuu namni beeku jira, Rataa jechuu isaati. Kanaaf mallaqa kennen gadi dhiisisa dafa qarshii erga” jedhan.
Isaanis mallaqqa dilbii erga itti erganii booda Rataa wajjin adda qoodatanii, warra qabame kana rebicha hamma irratti gaggesani, gocha sukaneessa gurra namatti hin tolle erga irratti rawwataniin booda Kun” Ragaa gahaan irratti hin argamne jechuun kan immo “isaan kanirratti ragaa bahi jechuun” (namni sodatu keessatu ofii bahuu jecha waan hin arginis ni lafalafa) dararaa ji’a afuriin booda gadi dhiisu.
Girmaan ennasuma warra Asamaratin”kun ilaala abaluufi abalu gadi dhiisise jechuun gabaasa.
warri gamaas “qabsaa’an akka Girmaa hin jira? isin kumatamarra Girma tokkocha naa caala” enyutu jedhee?
Hundaafuu Girmaan ammas badhaasa qaba. Kana Ratta wajjin adda qoodatu.
Haala kanaan maqaa ilmaan qabsoon dhiiga nama meeqa dhagalasan. Seenan yaa dubbatu. Hundaafuu basaasa Girmaa fi obbo Rataan haal kanaan qarshii miyeena 42 ol akka kuusatan himama. Kan Girma account isaa argine jedhaniiti. Kan Rataa tilmaama kooti. qexxee qixxe yoo ta’e sanuma miti ree?
Kana kaa amma nageenya eegisisa jedhamee kan komandi postitti filame jedhamu. Hin bariitu seete jaartiin……..
Gen Gebre Dilla ( Cheif of defense intelligence)
Abba Abdii Illee, Abba Liyyu polisii ilma abban dhalche Gabree Dilla dhalata Tigirayi. Gabreen daldala jimaa fi kontirobandiin tujaara ana ofiin jedhe. Qonnaan bula Harargee kan omishee harka duwwa hafu yaa rakkatu malee inni maalif? Akka Hayila mariyaam nutti himetti Liyyu poliisii ilmaan isaa kan nutti bobbase jima ana malee namni tokko alatti hin ergu jedheeti jedhan. Ammas hoganaa komandi postii ta’uu mala. Gambree wadi Dilla maltu dhiba. waan tokko yaadadhe.
yeroo tokko namni wayii “rakkoon wayaane inni guddan waan tokko hin beektu waan hunda akka dandeesu of fakeesu ishiiti jedhe.
Jeneraala tokkotu ture. Yeroo lola shabiyaa san xiyara qabadhee dhaqee Shabiyaa biyye nyachisu male jedhe. Lakki karaa san sirri miti. Radarii keessa galta, farrii xiyaraa bayyinaan jira jedhaniin. Callisi gorsa keessaniin Dargi mo’anne jedhen. Gorsa Oromo jechu isaati. Oromitichi dhaqi nagaan sin galchiin jedheen afaan Oromon.
minalki jennan yekina jedhe. Awun tayalee dimitimatachawun atifiche si maxa ane wadi …
Sa’aa tokkon booda farrii xiyaraa Eritiraa bureetti simatte. wadii abaluun achumaan bara baraaf.
General Abreha Woldemariam/ Quarter ( Chief of Operations) – Kunis kontirobandistii beekamadha.
Dhiifama edaa immo iftaan nan barsiisa. silaa waan bayyen barreesa. Nagaan naaf bulaa. Via Teferi Nigussie Tafa
SBO: Sagalee Bilisummaa Oromo, Onkoloolessa 29, 2017
1 thought on “Oduu gara garaa – Onkoloolessa 29, 2017”
The only solution is Oromos must build the unbreakable TOKKUMMAA within themselves and with others ethnic groups in Ethiopia.